र मेक्सिको मा रूसी मेरो ग्रह
नयाँ श्रेणी मेरो ग्रह प्रश्नहरू सोध्छन्. दोस्रो संस्करण मास्को देखि बताउँछ कसरी त्यो बस्थे देश मा बुर्रिटो र एक विस्तृत- टोपी मेक्सिको.
कसरी अरू व्याख्या गर्न मेरो आवेग लागि केन्द्रीय र दक्षिण अमेरिका । बाल्यकाल देखि चासो संस्कृति र इतिहास अमेरिका र एक विदेशीले रूपमा हेर्न चाहन्थे रहेको भारतीय शहर आफैले देखि छैन, पुस्तकहरू । पेशा द्वारा म हुँ एक अनुवादक देखि अंग्रेजी, थाहा स्पेनी. एक दिन म चढाएको थियो, एक काम रूपमा, एक भ्रमण पुस्तिका मा मेक्सिको. म गए एक विदेशी देश मा पूर्ण भरोसा छ कि म जस्तै हुनेछ. पहिलो वर्ष, त्यसपछि अर्को, एक तेस्रो छ । अन्तमा स्वीकारे भनेर आफैलाई. त्यो एक सुन्दर वाक्यांश स्पेनिश मा यात्रा बारे छ । शाब्दिक: एउटा बाटो लिनुहोस्, र एक तालिकामा. गरे जहाँ मेरो अन्तिम नाम, र फेरि. प्रेममा फसे र विवाह एक मेक्सिकन. आफ्नो नाम दाऊदले छ. यो सरल छ । मेक्सिको मा बलियो अर्थमा को. रूस मा, बलियो परिवार सम्बन्ध, सामान्यतया बीच घनिष्ठ नातेदार । र मेक्सिको मा, परिवार सबै छ: हजुरआमा, भतीजे, र चचेरे छ । सारा भीड भेला लागि रात्रिभोज, सप्ताहन्तमा र बिदाहरू छ । मजा र दुःखी सँगै । यहाँ, परिवार पवित्र छ । (मेरो ग्रह अघि म यस्तो लेखे बारेमा विशेषताहरु को मेक्सिकन.) मा मेक्सिकन परिवार को को जिम्मेवारीहरू । म खाना र सान्त्वना बिन्दु, पति भारी तोप छ । र मेरो श्रीमान् र म दुवै काम. सामान्य मा, मेक्सिकन मानिसहरू वास्तविक हो । प्रेम सुन्दर महिला, खान, रक्षा, मनपर्ने, डाह छ । मेक्सिको एक आपराधिक देश, यो साँचो हो । तर यो सबै निर्भर क्षेत्र । पर्यटक ठाउँमा राम्रो तरिकाले सुरक्षित छ । सीमा मा संयुक्त राज्य अमेरिका संग, को पाठ्यक्रम, खतरनाक छ । मलाई आपराधिक मेक्सिको को महिमा को एक उच्च शक्ति छ । चिन्तित छैन. साथै मास्को बस्थे । मेक्सिकन समाचार बस राम्रो छैन हेर्न । हामी बाँच्न क्यानकुन मा, एक संग निजी सुरक्षा र राम्रो पूर्वाधार छैन । यो एक लोकप्रिय र सुरक्षित फारम को आवास । एक सानो मा शहर को दुर्गम भाग छ जहाँ कुनै र शोर देखि यातायात र नजिकै प्रकृति । हालै उत्प्रेरित मेक्सिको, अधिक र अधिक मान्छे । सम्पत्ति किन्न, बच्चाहरु, प्राप्त एक पासपोर्ट छ । र यहाँ राम्रो: संयुक्त राज्य अमेरिका मा चलान मुख्यतः आपराधिक तत्व । तर, आधा शताब्दी पहिले, मेक्सिको दुई पटक थियो, क्यालिफोर्निया, एरिजोना, टेक्सास, न्यू मेक्सिको र अन्य अमेरिकी अमेरिका । अब को एक धेरै छ मेक्सिकन परिवार छ । र यो साधारण नागरिक जो कुनै पनि नातेदार यहाँ । हामी जारी गर्न चाहनुहुन्छ, कुराकानी गर्न बाबजुद नीति छ । एक सकारात्मक मनोवृत्ति गर्न रूसी. आदर को भ्लादिमिर पुटिन । तिनीहरूले उहाँलाई पराउँछु. साधारण नागरिक पनि, विशेष गरी महिला आधा । भन्छन्, कहीं दुनिया मा छन्, यति धेरै सुन्दर र बुद्धिमान महिला । एकै समयमा जोड शब्द स्मार्ट । के अझै पनि लाग्छ बारेमा रूस र रूसी मा पढ्न हाम्रो विषय सामाग्री. कसरी बताउन राम्रो पुस्तिका देखि एक. राम्रो थाहा छ, कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्न, कुराकानी गर्न, पर्यटक. मेरो राय मा, यो पेशा को एक पुस्तिका, छैन एक पेशा हो, तर एक व्यक्तिको पेशा, एक जीवन शैली, एक आध्यात्मिक आवेग । छ भने यो महसुस हुनेछ, एक ठूलो पुस्तिका. यो पुस्तिका सुपर लाभदायक छ । तर म पर्याप्त छ । मेरो लागि काम छैन सिर्फ एक तरिका को कमाई छ, तर पनि एक मौका प्राप्त गर्न सकारात्मक भावना छ । के तपाईं किन्न लागि एक सय पेसो मेक्सिको मा.
दुई टिकट सिनेमा
एक बोतल. एमबी को मोबाइल इन्टरनेट छ । कार धुनु सेवा छ । एक पाँच मिनेट टेलिफोन कुराकानी संग मास्को. खाने को लागि एक केही सस्तो क्याफे छ । एक बुर्रिटो लागि तयार छ पर्यटक । यो एक क्लासिक मेक्सिकन पकवान । मुख्य पकवान: मकै छ, जो वरिपरि लिपटे मासु, प्याज, टमाटर.
र तातो खुर्सानी सस
के हामी कल गर्न प्रयोग मेक्सिकन साबुन, यहाँ भनिन्छ. एक तिनीहरूलाई को धेरै छ । हेर्न । र आधुनिक श्रृंखला जस्तै वाइकिंग छन् हटाइएको छैन । तीन मुख्य कुराहरू तपाईं बारेमा जान्नु आवश्यक मेक्सिको: तेजस्वी प्रकृति, पुरातन परम्पराहरूको, यस्तै रूसी. र तीन खराब: थिए, भन्दा राम्रो हो रूसी फुटबल खेल्न, र यदि एक मेक्सिकन भन्छन् (अब, एक मिनेट पर्खनुहोस्) यसको अर्थ कहिल्यै । (देश बारेमा र यसको मान्छे, संकलन मेरो ग्रह.). यो विश्वास छ कि मेक्सिको मा लोकप्रिय मृत्यु भएको छ । यो छ छैन यति छ । यो बस को बारे को उत्सव को मृत को दिन, भरिएको छ जो प्रतीक को र. राष्ट्रिय स्मारक को सम्मान मा छुट्यो मा संसारको अन्य नातेदार । एक राम्रो परिवार छुट्टी । खोपडी प्रतिबिम्बित व्यंग्यात्मक मनोवृत्ति गर्न मृत्यु भएको छ । यसरी तिनीहरूले भन्न डराउँछन् छैन उनको र त्यो कहिल्यै हुन सक्षम गर्न छुट्टै प्राण जीवनसाथी. रूस मा हामी प्रयास गर्न यात्रा छ, हरेक वर्ष । जस्तै गर्मी र प्रारम्भिक शरद ऋतु । त्यहाँ छ तिर्सना छ । पर्याप्त समय रमाइलो गर्न घर । (के सिक्न पाँच कुराहरू सम्झना गर्दै रूसी, विदेश मा यो लेख मा मेरो ग्रह।) यदि तपाईं राखे मेक्सिकन सूर्य रूस मा, यो हुनेछ मेक्सिको. परिवर्तन को उपस्थिति को रूसी, वास्तुकला, प्रकृति । रूस एक सुन्दर रूपमा यो छ । म जस्तै बाँच्न दुवै त्यहाँ र यहाँ । जीवनको अर्को देशमा नयाँ सिर्जना गर्ने बानी छ । म भए बढी सहिष्णु र. सिके स्वीकार गर्न मानिसहरूलाई लागि. प्रेम मा गिर प्रकृति । तर म अझै पनि छु नै धनुराशि, बस अब
बारेमा विस्तृत जानकारी र भिडियो च्याट सत्र संग बालिका देखि एक र एक मानिसको विचार को लागि भिडियो च्याट →